आधा सिट खालीनै उड्छन वाइडवडी जहाज, छोटो उडानले इन्जिनको साइकल खेर जादैं - Kachahari.com
आधा सिट खालीनै उड्छन वाइडवडी जहाज, छोटो उडानले इन्जिनको साइकल खेर जादैं
काठमाडौंः नेपाल वायुसेवा निगमले झन्डै २४ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर दुई थान वाइडवडी जहाज खरिद गरेको छ । जसको बार्षिक ब्याजनै २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पर्दछ । जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेकोनै ६ महिना भन्दा बढी भइसकेको छ । यो समाचार आजको कारोबारले लेखेको छ ।
निगमले दुई थान वाइडवडी जहाज खरिदपश्चात निगमको बजार हिस्सा १७ प्रतिशत पुग्ने दावी गरेको थियो । भने १० लाख भन्दा बढी हवाई यात्रुलाई सेवा दिने समेत घोषणा गरेको थियो ।
संसद देखि सरकारसम्म निगमले खरिद गरेका जहाजको अनियमितता भएको भन्दै हंगामा मच्चिएको छ । तर जहाज कति उड्नु पर्ने हो ? जहाज कुन गन्तव्य र प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो ? भन्ने बहस भने निगम व्यवस्थापन देखि सरकारसम्मको प्राथमितामा परेको छैन । दैनिक १६ घन्टासम्म उडान भर्न सक्ने जहाज यतिवेला ८ घन्टा पनि मुस्किलले उडान भरिरहेको स्वंयम निगम व्यवस्थापनै बताउँदै आएको छ ।
दक्षिण कोरिया, जापान, चीन र युरोप लगायत गन्तव्यमा उडान भर्ने घोषणा सहित जहाज खरिद गरिएको थियो । तर जहाज पुरानै न्यारोवडी जहाजले उडान भरिरहेका गन्तव्यमा उडान भर्दै आएका छन् । दुई साता अगाडी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले आयोजना गरेको समिक्षात्मक बैठकमा निगमका कार्यकारी अध्यक्षले वाइडवडी जहाज ७ देखि ८ घन्टा उडान गरिरहेको बताएका थिए । उनले फेब्रुवरी महिना देखि जापान उड्ने समेत बताएका थिए । तर निगमकै एक अधिकारीले फेब्रुवरीमै जापान उड्न नसक्ने जिकिर गर्दछन् ।
निगमका एक अधिकारीका अनुसार २ सय ७५ सिटको एयरवस ३३०–२०० सिरिजको वाइडवडी जहाजमा न्यारोवडी जहाजका १ सय ५६ यात्रु राखेर उडाइदैं आएको छ । यसले वाइडवडी जहाज उड्दा पनि घाटामा उडाइरहेको ति अधिकारीको बुझाई छ । “जहाज आएको ६ महिनासम्म पनि नयाँ गन्तव्यको टुंगो लगाउन नसक्नु निगम व्यवस्थापनको चरम लापरवाही हो,” निगमकै एक इन्जिनियरले भने ।
निगममा नगद प्रवाहमै समस्या आएको जनाएको व्यवस्थान नयाँ गन्तव्य छिट्टै खोज्न नसकेमा झनै समस्या पर्ने र ऋणदताको पैसा समेत डुव्ने खतरा हुन सक्ने आंकलन ती इन्जिनिएर गरेका छन् । “ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको रकमले धनिएको निगम वाइडवडी आएपछि खर्च बढेकोले पनि अव १५ घन्टा फुल अकुपेन्सीमा जहाज नउडाए समस्य आउने छ,” ति इन्जिनियरले भने ।
निगमले खरिद गरेका दुई थान वाइडवडी जहाजका लागि १२÷१२ अर्ब रुपैयाँ संचयकोष र नागरिक लगानीकोषले दिएका छन् । एयरवस ३२० र एयरवस ३३० को उडान लागतमा आकाशपाताल फरक पर्ने प्राविधिकहरुको भनाई छ । “दुवैले बोक्ने यात्रु संख्या उही भएपछि व्यवसायिकरुपमा नचलेकै मान्नुपर्छ,” निगमका एक पाइलटले भने ।
अर्बौं लगानीका एयरबस ३३० ले एकातिर छोटो दूरी उडेर इन्जिनको लाइफ साइकल खेर फालिरहेका छन् । अर्कोरित बजार प्रर्वद्धन अभावमा २७५ सिट क्षमता भए पनि १५६ सिट क्षमताका एयरबस ३२० कै यात्रु बोकेर हिँडिरहेका छन् । एयरलाइन्सले मलेसिया र दुबईमा उडान अनुमति पाएको छैन ।
कोरियाले अनुमति दिनु पहिले सुरक्षा अडिट गर्न एक टोली पठाउने पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रअनुसार नेपाल बोलाउने तयारी भए पनि अहिलेसम्म बोलाइएको छैन । भने जापान र साउदी अरेबियामा निगमले अहिलेसम्म जेनरल सेल्स एजेन्ट समेत नियुक्त गर्न सकेको छैन । साउदीमा एयरलाइन्स टोली पुगेर कानूनीरुपमा अनुमतिका लागि सबै प्रक्रिया .पूरा गरिसकेको तर उताको निर्णय आउन ढिला भएको निगमको भनाई छ ।
जापानमा भने एयरलाइन्सले उडान अनुमतिका लागि आवेदन मात्र दिएको छ। अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले खरिद प्रक्रियाको छानविनकै कारण उडानमा समस्या नहुने बताउँछन् । “छानविन चलिरहने तर नयाँ गन्तव्य पनि खोजिभइरहेको र छिट्टै सुरु हुने दावी गर्दछन् । अव चीन, जापान र कोरिया निगमले छिट्टै उडान भर्ने छ,” मन्त्री अधिकारीले भने ।
एयरवस ३२० जहाजको सी–चेकिङ गर्न साँढे दुई अर्व
निगमले वाइडवडी जहाजलाई गन्तव्य नपाइरहेकावेला यता नेपाल वायुसेवा निगमका एयरवस ३२० न्यारोवडी जहाजको समेत इन्जिनको ओभरल (सि–चेकिङ) गर्नुपर्ने समय आएको छ । जसका लागि निगमले कम्तीमा २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । निगम संचालक समितिमा अहिलेसम्म उक्त प्रस्ताव नआएको संचालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । वाइडवडी खरिद प्रकरणकै कारण उक्त निर्णय गर्न समेत संचालक समिति हच्कीएको छ । “अव यो निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्बाटै गर्न पर्ने अवस्था आएको छ,” ती सदस्यले भने । जहाजको प्रत्येक दुई वर्षमा सि–चेकिङ अनिवार्य गर्न पर्ने हुन्छ ।